संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने
वाम गठबन्धन संविधान संशोधन गर्न तयार भएपछि संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न वाम गठबन्धन तयार भएपछि फोरम सरकारमा जान सहमत भएको हो । दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनापछि एमाले संविधान संशोधनमा तयार...
संसद सचिवालयको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै
संघीय संसदको पहिलो बैठकका एजेण्डाबारे छलफल गर्न संसद सचिवालयले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । संसद सचिवालयले बुधबार दिउँसो २ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा बैठक आह्वान गरेको हो । सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलबाट एक-एक जना प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोल...
Showing 1 - 10 of 2005 results